Xildhibaan Zakariye “Kenya arrintan Badda ma deyneyso, annaguna is-dhiibi-meyno” – Kalfadhi
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji, oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, ayaa sheegay dooda Badda in ay sii xumaan karto, hadhowna dhibaato ay soo gaari karto Soomaalida degan dalka Kenya, gaar ahaan kuwa hantida ku leh magaalada Nairobi.
Waxaa uu sheegay in Soomaalidaasi ay kasii tabaabusheetaan, “Sababtoo ah lama dhihi karo, dad koox ah oo kumanaan ah ayaa noo jooga Kenya, sidaa darted aan wax walba u oggolaano Kenya, magaalooyikeenna ha qabsadaan, oo hana maamulaan, baddana ha qaataan”, ayuu yiri.
Sidoo kale waxaa uu carabka ku adkeeyay in dhowr guryo oo Soomaalida ay ku leeyihiin dalka Kenya iyo hanti kale in aysan u dhigmin mugga badda Soomaaliyeed ay leedahay iyo ahmiyadda ay ugu fadhido ummadda Soomaaliyeed. Waa in ay kasoo guuraan ama ay u diyaar-garoobaan waxa dhici doona, ayuu sii raaciyay.
“Anniga waxaan oggahay, Kenya arrintan ma deyneyso, annaguna is-dhiibi meyno, aakhirkana faro leslama-gefi maayo. Waxaa ay noqon doontaa shacbiga Soomaaliyeed oo dhan, NFD midka degan iyo kan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan Soomaali-Galbeed iyo kan Jabuuti wey ku midoobayaan, waxaana ay noqoneysaa in Kenya ay jabto, haddii aysan naga deynin, daan-daansiga iyo weerarka tooska ah ee ay nagu heyso”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Waxaa uu dhinaca kale ugu baaqan shacabka Soomaaliyeed, in la qaado ololeyaal lagu ilaabayo aqli-xumadii dadka ku dhacday iyo wixii la isyeelay dalkana la difaaco.
6-ddii bishan September Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Fiqi ayaa sheegay in Maxkamada caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay mudo laba bilood ah dacwaddii xagga badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxa xukuumadda Galmudug oo Dhuusamareeb kula kulmay Xildhibaan Fiqi iyo musharax Odawaa